Zaridaina | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fampiasana mulberry, ny tombony sy ny fahasimbana amin'ny fahasalaman'ny olombelona
Mulberry (Moraceae) - zavamaniry iray avy amin'ny karazana Mulberry (antsoina hoe "mulberry", hazo mahatratra 20 metatra). Io karazan-javamaniry io dia ahitana karazana zavamaniry maherin'ny 17 izay pesta any Persia. Mora kokoa ny mamantatra ny mulberry: misy ravina nopotehina, toy ny lelavola, ary voankazo tahaka ny mainty hoditra.
Quince: fitsangatsanganana sy fikarakarana
Matetika ny varimbazaha dia marefo be, toy ny paoma na boka, antsoina hoe "kisendrasendra". Manana fananana mahasoa maro izy io, saingy ho an'ny vokatra tsara indrindra amin'ny zavamaniry dia ilaina ny manome ny fepetra tsara ho an'ny fivoarana sy ny fampandrosoana. Andao hiezaka hamantatra ny kintsina sy ny fomba hikarakarana tsara azy io.
Ny fomba hambolena sy fitomboan'ny irgu
Matetika dia mitranga izany fa ny zavamaniry manapotipotika izay mitaky fikarakarana sy fikarakarana tsy tapaka dia omena fiheverana bebe kokoa, ary tsy hentitra loatra amin'ny fomba tsy mendrika. Kolontsaina tahaka izany ary irga. Amin'ny ankapobeny dia azo jerena any amin'ny faritra sasany any an-tokotany. Saingy tsy ny rehetra no mahafantatra fa irga dia zavamaniry ornamana miavaka, izay manan-danja any amin'ny firenena maro.
Toby magnolias ao an-jaridaina
Azo antoka fa maro ireo olona farafaharatsiny dia tsy maintsy nijanona teo amin'ny lohataona teo anoloan'ny tokotanin'ny olona iray na zaridaina iray, nahagaga fa nisy sary tsy mahazatra - voninkazo mavokely, fotsy na volomparasy amin'ny hazo tsara tarehy sy malemy tsy misy ravina. Mamelana magnolia izany. Raha vao jerena aloha dia mety ho toa ny fahagagana toy izany ihany no afaka hambolena ireo mpamboly za-draharaha, rehefa nametraka vola be ary nanamafy ny ezaka nataony.
Inona no nambolena tao amin'ny zaridaina
Genus Magnolia (avy amin'ny latinina Magnolia) - ny tranainy indrindra amin'ny zavamaniry voninkazo. An'arivony (fianakaviana mihoatra ny 120) ny fianakaviana Magnolia, ny sasany amin'izy ireo dia marefo, ary mitombo ao amin'ny faritra misy toetr'andro. Fantatrao ve? Ity karazam-piaviana ity dia noho i Charles Plumier, izay nantsoina ho fanomezam-boninahitra ny mpahay zavamaniry frantsay Pierre Magnol.
Pikantsary voatokana: fitondran-tena tsara sy fikarakarana herintaona
Olona farafaharatsiny, fara fahakeliny teo amin'ny fiainany, indrindra fa tamin'ny fahazazany, nandevina vato tany an-tany. Eo am-pandefasana dia lemon-koditra, ravina, paoma. Naniry tsimoka izy ireo, izay nanome ravina vitsivitsy mihitsy aza. Saingy taorian'ny volana vitsivitsy, na ny volombavam-borona na ny kirihitra dia nitombo tao anatin'ny ravina feno, izay tsy nitondra vokatra mihitsy. Fantatrao ve ny fomba hanamboarana abrikô iray avy amin'ny vato ao an-trano?
Ahoana no hiatrehana ny aretin'ny abrikô
Noheverina fa tany am-piandohan'ny abriky mamy i Armenia. Efa hatry ny ela izy no nitombo tany India sy Shina. Noho ny fanatontoloana, io voankazo mamy io dia niely eran-tany. Ny hazo aviavy dia aretin-koditra, saingy ao anatin'ny toetr'andro dia mety hisy fiantraikany amin'ny aretina samihafa. Noho izany, mampitombo ny hazo rongony ao amin'ny zaridainanao, mila miomana amin'ny ady amin'ny aretina an'ity kolotsaina ity ianao.
Mikarakara euonymus ao an-trano
Indraindray ny saintsika dia teren'ny alika iray misy ravina maitso maitso mamirapiratra mamirapiratra sy voankazo tsara. Tena manintona izy ireo ka te hanandrana azy ireo. Ity dia euonymus. Moa ve ny voankazo voajanahary amin'ny euonymus ary aiza no tokony ho lazaina amin'ny zavamaniry poizina na fanafody? Ny Euonymus dia manana karazany maherin'ny 200 ary ampiasaina amin'ny fambolena zaridaina.
Fomba hisafidianana ny fantsona fanondrahana rano: karazana sy ny toetoetry ny valan-javamaniry
Tsy azo atao ny maka sary an-tsaina ny zavamaniry fambolena tsara sy tsara tarehy tsy misy rano fisotro madio, izay tanterahina miaraka amin'ny fanampian'ny hosoka. Misy karazana hosoka maro samihafa izay tsy mitovy amin'ny fisehony, fa amin'ny kalitao ihany koa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny tsara kokoa ny mifidy sambo ho an'ny firaka, ny fomba fitehirizana tsara sy ny fampiasana azy.
Ny karazana varimbazaha sy karazana varimbazaha mahazatra indrindra
Ny hazo amam-boninkazo dia ny hazo alimo. Ny tanindrazan'ilay zavamaniry dia heverina ho ny Mediteraneana sy Afovoany Azia. Amin'izao fotoana izao dia mamboly azy any Shina, Etazonia, ao Crimea sy ny Caucasus, any Rosia, Slovakia ary ny Repoblika Tseky, any Moravia. Ny mahazatra Almond mahazatra Almond dia mizarazatra ho roa ambongadiny: almonds (alika) marefo sy almandy mamy.
Fitsipika momba ny fisotroan-doko
Amin'ireo fitaovana marobe natao ho an'ny fikarakarana ny zaridaina an-jaridaina, ny pruner dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny heviny fa na dia vitsy ihany ny liana amin'ny fambolena dia mahatakatra ny anaran'ilay fitaovana amin'ny zavatra tadiavina. Fantatrao ve? Ireo sambo voalohany niseho tany am-piandohan'ny taonjato faha-19 dia nitovitovy tamin'ireo mpanodina amin'izao fotoana izao ary nampiasaina hanapaka ny voaloboka.
Famoahana ny fanosorana menaka: ny fijinjana, ny fambolena, ny fambolena ary ny fikarakarana
Ny zaridaina tsirairay dia manana ny zavamaniry tiany indrindra. Matetika ny fanintonana lehibe sy ny harena dia lasa mofomamy mamy tsara ao amin'ny zaridaina. Ny tsiro dia tsara tsy noho ny tsirony, fa manana fanasitranana be dia be izy. Io voankazo io dia manankarena amin'ny magnesium, vy, zina, vitamin C, ary ao anatin'ny dingan'ny fitomboana manangona vitamin B2, mampiroborobo ny fatran'ny kômôhy.
Fikarakarana sy fambolena jujube
Any amin'ireo faritra misy mponina amin'ny fahavaratra, dia azo atao ny mahita zavamaniry hafakely sy tsy mahazatra izay tsy vitan'ny manamboatra endri-javatra fotsiny, fa afaka mitondra vokatra tsara. Noho izany, ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny iray amin'ireny zavamaniry ireny, fantatra hatrany avy hatrany amin'ny anarana "maro": zizifus, unabi sy daty Shinoa.
Asidra borikika ho an'ny zavamaniry: fomba fampiasana ao amin'ny trano fonenana
Ny asidra borikika dia ilaina amin'ny voankazo, legioma, voankazo ary vatomamy. Tsy vitan'ny hoe miaro azy ireo amin'ny mikraoba marary, fa mampitombo ny vokatra koa, manampy amin'ny fitomboan'ny votoatin'ny siramamy. Ny vokatra dia mamy sy mamy tsara. Ankoatr'izany, ireo zavamaniry voatokana dia tsy voan'ny rot, ny voany dia tsy mangatsiaka avy amin'ny hafanana tafahoatra.
Tsiambaratelon'ny fambolena sy fikarakarana ny tunbergia
Tunbergia dia miditra ao amin'ny fianakaviana acanthaceae. Ny tanindrazany dia heverina ho tropika any Afrika. Misy karazany 200 eo ho eo. Ny anaran'ilay zavamaniry dia fanomezam-boninahitra ny mpandaha-teny Soedoà Karl Peter Thunberg. Mbola manana anarana hafa ny voninkazo - "suzane mainty hoditra". Miantso izany aho noho ny loko eo afovoan'ny voninkazo - volomparasy matevina.
Zavakanto Norvezy any amin'ny faritra
Maple dia hazo malaza. Mahita azy na aiza na aiza: any amin'ny valan-tanàna sy eny amin'ny kianja, any an'ala, amin'ny trano fatoriana. Manintona ny saina izy noho ny ravina mahafinaritra sy ny satroboninahitra, voankazo tsy mahazatra. Indrindra ho tsara tarehy amin'ny fahalavoana, rehefa ravina ny raviny amin'ny fararano mamirapiratra mamirapiratra: jiro, volomparasy, volomparasy.
Karazam-borona manao ahoana no mety ho an'ny fambolena any ambanivohitra
Kiraro volom-borona, izay heverin'ny olona ho karazana volom-borona, dia mifandray mandrakariva amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny faritra atsimo. Ary tiako ho ilay teratany ho teratany ho an'ny faritra Moskoa, ary anisan'izany ny karazany tsara indrindra. Ireo karazana varimbazaha ireo dia nalaina fotsiny noho ny kavina, izay nanenona azy ary nitaingina azy. Amin'izao fotoana izao dia misy poizina any ambanivohitra izay manan-danja toy ny any amin'ny faritra.
Vorona kirihitra: fambolena sy fiahiana
Ho an'ny olona maro, ny kirihitr'io vorona io dia mifamatotra hatrany amin'ny fiandohan'ny lohataona, satria ny fofony no mameno ny rivotra manjopiaka vaovao, ary ny fomba entin'ny tsiratsiraka kiran'ny tsindrimandry. Ity karazana zavamaniry ity dia tena manintona tokoa amin'ny tany voafidy, ny kalitaony, ny akora ary ny rano sy ny jiro.
Ho an'ny mpijinja dia mila misafidy ny karazany mety ianao. Misy karazany maro ny karazana mahaliana sy malaza. Ny iray amin'izy ireo dia ny penn Stanley ("Stanley") - ny famaritana amin'ny antsipiriany momba io karazany io, ary koa ny fototry ny fambolena, dia azo jerena ato amin'ity fitaovana ity. Ny tantaram-pambolena karazana plum "Stanley" Ny karazany "Stanley" dia avy any Etazonia.
Fanamboarana blistera amin'ny trano fatoriana
Bubbyplodnik dia akorandriaka tsara tarehy izay mitazona ny endriny mandritry ny vanim-potoana rehetra. Mamolavola satroboninahitra manify misy rantsana manify. Ny ravina voapotsitra dia manome azy ho endri-tsoratra manokana. Miaraka amin'ny vokatra avo lenta, ny bambooberry dia manamarina ny fambolena azy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Zaridaina